Global Voices teny Malagasy » “Mahagaga ny tsy ahitàna teny mifandraika amin’ireo fangatahana ara-tsosialy sy ny fiarovana tany ataon’ireo vondrompiarahamonina” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 07 Desambra 2019 9:19 GMT 1	 · Mpanoratra Verónica Aguilar Martínez Nandika (en) i Rising Voices, imanoela fifaliana
Mangataka ny olona mba hamaly ireo lohahevitra sy olana mibahana indrindra izay miseho anatin'ny fandrakofam-baovao mikasika ny vondrompiaharamonina misy azy ny Tetikasa Reframed Stories . Ireo tantara ireo dia fandinihana avy amin'olona izay matetika dia ny hafa no maneho ny momba azy ireo anatin'ny haino amanjery. Misy rahon-teny vokarina amin'ny alalan'ny sehatra Media Cloud , fitaovana iray fanadihadiana rakitra ka mandinika angonà fitaovana fampiasa anatin'ny haino amanjery mandritra ny fotoana voafaritra, izay ahafahan'ireo mpandray anjara manadihady sy miresaka momba ireo vaovao voalohany amin'ny fomba mety hanehoana azy ireo anatin'ny haino amanjery. Miezaka ny tsy hanao tsoakevitra mikasika ilay rakitra ilay tetikasa, fa kosa teboka fiandohana izay mamorona sehatra hiresahana mikasika ny fomba ahafahan-dry zareo manampy amin'ny famolavolàna ny fanehoana azy ireo anatin'ny haino amanjery amin'ny alalan'ny haino amanjery niomerika.
Ampahany amin'ireo andianà Rising Frames novolavoloina tao anatin'ny hetsika natao nandritra ny Fetiben'ny Tenin-janatany tao amin'ny Aterineto  ny 27 Oktobra 2019 ity. Nampitambatra ireo mpisolo tena avy aminà fikambanana sy vondrona maro samihafa ilay atrikasa mba handinihana ny fanehoana azy ireo na ireo olana manahirana azy any amin'ireo angon'ny haino amanjery amin'ny teny Amerikana Latina ary namorona tantara ho valin'izany fanehoana izany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/12/07/145104/
 Fetiben'ny Tenin-janatany tao amin'ny Aterineto: http://lenguasindigenas.digital